Nagu saabsan - Quanzhou Tianli Co., Ltd.
Quanzhou Tianli Production Product Production Co., Ltd.(SSP) oo la asaasay sanadkii 2010, wuxuu ku yaal magaalada Quanzhou, Fengze oo hodan ku ah timo timaha. Shirkadeena waxay ku takhasustay soo saarista alaabooyinka difaaca ee neefsashada.
SSP waxay ku qalin jabisay shahaadooyin gaar ah oo loogu talagalay soosaarista maaskaro xirfadeed. Waxaan nahay mid ka mid ah dhowr warshadeyn oo helay shahaadooyinka NIOSH N95. Iyo shahaadooyinka CE, Benchmark, LA, QS, PM2.5 warqad la oggolaaday iyo kuwo kale oo badan isla waqti isku mid ah.
Muddo sanado ah oo baaritaanka qun-socodka ah ee Machadka Qaranka ee Badbaadada Shaqada iyo Caafimaadka (NIOSH), Maamulka Guud ee Ilaalinta Tayada, Kormeerka iyo karantiilinta Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha (AQSIQ), Ururka Macaamiisha Shiinaha (CCA), Xafiiska Magaalada tayada ee Shanghai iyo Tayada Farsamada. (SMBQTS), alaabteena ayaa si fiican u fuliya kormeerka.
Waxaa ka mid ah kormeerka suuqgeynta ee CCA ee maaskaro 'Pm2.5' ah sanadkii 2015, maaskaro-wareedkeena 8285 wuxuu ku guuleystaa sharaf ay ka helaan kaliya shayga kaliya ee shan-xiddigle ah. Maska nooga ilaaliya gaarka ah ee astaanta MASKin waxaa yaqaan macaamiisha waxayna ku guuleystaan ​​sumcad wanaagsan sidoo kale waxay dhisaan muuqaal tayo sare leh maanka ururada xirfadlayaasha iyo macaamiisha.
waxyaabaha ugu waaweyni waa noocyo kala duwan oo mashiinka PPE ah iyo waji-xidho Pm2.5 ah, sida waji-qaabeynta koob-shaarka sare ah, waji-xajista filtering sare iyo noocyo kale oo badan iyo noocyo kala duwan. Waxaan leenahay awood xoogan xagga cilmi baarista iyo horumarinta wax soo saarka iyo tikniyoolajiyada waxaanan inta badan ku guda jirnaa sameynta soo saarida OEM iyo ODM. Shirkadeena waa soosaaraha OEM ee qaar ka mid ah noocyada caalamiga ah ee caan ku ah maaskaro ilaalinta khibrad leh iyo alaab-qeybiyeyaal gaar ah oo ka mid ah noocyada maxalliga ah ee dhalashada cusub ee PM2.5 maaskaro.